I-90 GIRAFFE TATTOO UYILO LWAMADODA-IINGCAMANGO ZENKOZO EZINDE ZENECK - UHLOBO
I-90 Giraffe Tattoo Uyilo lwaMadoda-Iingcamango zeNkozo ezinde zeNeck
I-gallantry enkulu ye tattoo yendlulamthi idume ngokufanelekileyo ngobuninzi babafana abanesitayile. Ezi zigebenga zithambileyo ziyakwazi ukufaka ukubanjiswa okungaphelelwa lixesha kuwo nawuphi na umbono wendoda weinki yeenkwenkwezi.
I-inki yendlulamthi yindlela enamandla yokubonisa imeko yakho njengendoda eyindoda. Iintamo zabo ezide zilingana ngokuthe ngqo nenqanaba lentlalontle.
Oku kuphakama kukwanika amandla okubona kude nakude, ke bayahlonitshwa phakathi kwabo bagxininisa umbono ofikelela kude kwimizamo yabo yehlabathi.
Kwimijikelezo ye-shamanistic, ezi zilwanyana ezinobuzaza zidibene ne-psychic intuition. Iimpondo zazo ezintathu ezifihlakeleyo zithathwa njengeziqhelekileyo kumandla abo okungena kwiindawo eziphezulu zokuqonda. Ngaphandle kokuma komzimba womntu omnye, ezi zinto zimangalisayo zisengozini ngokukhethekileyo, kodwa zomelezwa kukwamkela ubuthathaka bazo. Ezi mpawu zefilosofi ziimpawu zobuntu ezixabisekileyo ezinokuthi zityhilwe ngomvambo wendlulamthi.
Okwangoku, ezinye ii-dudes ezide zinobuhlobo obukhethekileyo bendlulamthi, ngakumbi kuba ngokwendalo zinxulumene nobukhulu besidalwa kunye nokumila. Unxibelelwano lwabo akufuneki ludlulele ngaphaya kokufana okungaqhelekanga kunye nozuko lwengqondo. Njengobungqina, nantsi i-panoply evuyayo yeetattoos ezinkulu zeendlulamthi ukuze zikunike imo yokuvuselela ubugcisa bomzimba baseAfrika.
Ndingazenza zonke izinto ngoKrestu ondomelezayo
I-nike romaleos 2 vs 3
zenzele iimpahla zamadoda
ungamfumana njani umfazi ukuba akuthande
iinwele zamadoda zeenwele ezishinyeneyo